Ka eeg isku-duwaha UTM ee Khariidadaha Google iyo View Street - Geofumed
Juunyo, 2019 Google Earth / Maps
Tallaabada 1. Soo rog qaab-raaca macluumaadka quudinta. In kasta oo maqaalku uu diiradda saarayo isku-duwayaasha UTM, dalabka wuxuu leeyahay shaashad laatiimad iyo dhaadheer oo leh jajab tobanle, iyo sidoo kale heerar digrii, daqiiqado iyo qaab ilbiriqsi ah.
Tallaabada 2. Kusiiji template Adiga oo dooranaya qaab-dhismeedka xogta, nidaamku wuxuu heegan u yahay haddii ay jiraan xog aan la ansixin karin; Waxyaabaha lagu ansixiyey waxaa ka mid ah:
Arrinta la xiriira isku-duwaha waqtiga fog, waa ansax in latitude uusan ka badneyn 90 darajo ama in dhererka dhaadheer uu ka badan yahay 180.
Xogta faahfaahinta waxay taageertaa sheekada html, sida mid ka mid ah tusay tusaalaha tusaale ahaan ka mid ah soo dajinta sawir. Isla sidaas oo kale ayaa taageeraya waxyaabaha sida isku xirka waddooyinka internetka ama diskka kombiyuutarka, video, ama wax kasta oo hodan ah.
Tallaabada 3. Muuji xogta miiska iyo khariidada.
Ku jiid jaantuska khariidada waxaad horay u soo qaadan kartaa aragtida wadada ama aragtida 360 ee ay isticmaalaan dadka isticmaala.
Marka astaanta la sii daayo waxaad heli kartaa muuqaalka dhibcooyinka lagu dhajiyay muuqaalka Google Street View oo ku soo socda. Marka aad riixdo calaamadaha waxaad arki kartaa faahfaahinta.
Tallaabada 4. Hel xiriiriyayaal khariidad. Waxaad ku dari kartaa dhibco miis madhan ama mid laga soo dhejiyay Excel; isku-duwayaasha ayaa la soo bandhigi doonaa iyada oo lagu saleynayo sheygaas, tirinta lambarrada calaamadda iyo ku darista faahfaahinta laga helay khariidada.
Soo dejiso khariidadda Kml ama shaxda ugu fiican adoo isticmaalaya adeegga gTools.
Gali nambarka soo dejinta ka dibna waxaad haysataa feylka aad ku arki karto Google Earth ama barnaamij kasta oo GIS ah; Codsigu wuxuu muujinayaa halka laga helo koodh-ka-soo-dejin kaas oo aad kala soo dejisan karto illaa 400 jeer, iyada oo aan la xadidin inta xariiq ee ay ku jiri karaan degel kasta adoo adeegsanaya gTools API. Khariiddada oo keliya ayaa muujineysa iskuduwayaasha ka socda Gooogle Earth, iyadoo aragtida moodooyinka saddex-geesoodka ah la dhaqaajiyo.
Marka laga soo tago kml waxa kale oo aad kala soo bixi kartaa qaab heer sare ah oo ah UTM, latitude / longitude in desimim, digrii / daqiiqado / sekan iyo xitaa dxf si aad ugu furato AutoCAD ama Microstation.
Fiidiyowga soo socda waxaad ku arki kartaa sida xogta iyo astaamaha kale ee arjiga loo soo dejisto.
Halkan waxaad ku arki kartaa adeeggan bogga oo dhan.
Post Previous«Previous Download iyo rakibi ArcGIS Pro
Post Next Talaabooyinka lagu raadinayo telefanka gacantaNext »
2 Jawaab ah "U fiirso UTM isuduwaha Khariidadaha Google iyo Muuqaalka Waddada"
Juan Toro isagu wuxuu leeyahay:
Hello, subax wanaagsan ka soo Spain.
Codsiga xiisaha leh, in la helo macluumaad qiyaas ah.
Haddii xogta ama isuduwayaasha loo baahan yahay si sax ah, waxaa lagugula talinayaa in aad isticmaasho qalabkii darawalnimada ee ay isticmaalaan xirfadlayaasha takhasuska leh.
Ka dib waxay sidoo kale dhici kartaa in sawirka uu yahay mid gaboobay isla markaana raadinta xogtu aysan sii jiri doonin ama la dhaqaajin karin. Waa inaad aragtaa taariikhda markay Google "soo martay".
Danut isagu wuxuu leeyahay:
Sidee iyo meeqa loo dhigo Excel faylka 35T ee Roomaaniya? Aniga ma shaqeynayo. Haddii aan 35 dhigo oo kaliya tusi isku duubnaanta Central Africa?